Galaxy Bloom, ity no anaran'ilay finday avo lenta vaovao avy amin'ny Samsung | Androidsis
Galaxy Bloom, ity no ho anaran'ny finday avo lenta finday Samsung vaovao
Mandritra ny foara fampiroboroboana ny teknolojia, na CES, IFA na MWC, tsy vitan'ny fampisehoana fitaovana vaovao fotsiny, fa toerana fihaonany tonga lafatra ho an'ny fandaharam-potoana famoahana vokatra vaovao. Samsung, izay nanana hetsika lehibe tao amin'ny CES izay notanterahina tato ho ato tao Las Vegas, dia nanao fivoriana manokana amin'ity karazana ity.
Ny antony dia tsy iza fa miomàna amin'ny fandefasana ny terminal vaovao azo ahodina ao Samsung, terminal izay efa tafaporitsaka dia hatao hoe Galaxy Bloom. Ity terminal vaovao ity, izay araka ny loharanom-baovao izay nanatrika ny fivoriana, dia ho taranaka faharoa an'ny Galaxy Fold, na dia tsy dia mazava loatra amiko aza izany manokana, satria hevitra roa samy hafa amin'ny telefaona izy ireo.
Ny loharanom-pahalalana izay nanome ny sary tafaporitsaka izay mitarika ity lahatsoratra ity sy ny anaran'ny fantsona vaovao, dia manamafy fa ny lohan'ny fizarana smartphone Samsung, DJ Koh dia nanome rariny ny fanapahan-kevitra handray ity anarana ity satria Nahazo aingam-panahy azy ireo tamin'ny vovon-tsavony vita amin'ny makiazy avy amin'ny orinasa mpanamboatra tarehy Lancôme.
Toa ilay orinasa koreana mitady demografika hafa ianao amin'ity vokatra ityManokana, natao ho an'ny vehivavy eo anelanelan'ny 20 sy 30 taona izay hahita endrika amn'ny terminal izay hahafantaran'izy ireo azy. Hitanay indray fa tsy manana ny fisehoana ho andiany faharoa amin'ny Samsung Galaxy Fold ity terminal ity, fitaovana iray mikendry ireo karazana mpampiasa hafa.
Nandritra io fivoriana io ihany koa Voamarina fa ny Galaxy S11 dia hatao hoe Galaxy S20 ihany, ka ny avo lenta farany an'ny Samsung dia hamboarina amin'ny Galaxy S20, Galaxy S20 + ary Galaxy S20 Ultra. Ireo terminal roa ireo dia samy manana ny fahaizany mandrakitra horonantsary ao anaty 8k, ka mampiroborobo ny fahitalavitra 8k vaovao natolotry ny orinasa Koreana tao amin'ny CES.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Galaxy Bloom, ity no ho anaran'ny finday avo lenta finday Samsung vaovao
Fivoahan'ny takelaka Galaxy Tab S6